japanSamachar | विचार/ब्लग/अन्तर्वार्ता | 'नेपालमा बसेर यो ल्याईदे र त्यो ल्याईदे भन्नेले बुझुन् जापानमा डडाँल्नो अरर्रिनेगरि घोटिनुपर्छ'
(Japan) 24 th February | 2020 | Monday | 7:21:59 AM || (Nepal) 4:06:59 AM
'नेपालमा बसेर यो ल्याईदे र त्यो ल्याईदे भन्नेले बुझुन् जापानमा डडाँल्नो अरर्रिनेगरि घोटिनुपर्छ'
POSTED ON : Thursday, 14 February, 2019 | Views : 10600
अहिले नेपाली युवाहरुको महिनामै लाखौं कमाउने सपना जापान भईरहेको । जहाँ मान्छेहरु १२/१४ लाख ऋण गरेर घरबार धितो राखेर जापान आउनको लागि तयार छन् । उनिहरुको एउटै सपना छ जापान गएर महिनाको लाखौंं कमाउने ।
तर हरेक बर्षजस्तो लाखौं ऋण बोकेर जापान आएका नेपाली रित्तो हात नेपाल फर्कीरहेको खवर उनिहरुलाई थाहै छैन । किनभने सपना बेच्नेहरुले उनिहरुलाई सपनानै देखाईरहेका छन् वास्तविकता बुझ्ने मौकानै दिईरहेका छैनन् ।
हाम्रो समाजमा सुनेको भरमा जापान सबै थोक हो, पैसा सोहोर्न पाइन्छ, पैसाको भारी हाल्न पाइन्छ, काम गर्नुपर्दैन, सारा सबै सुविधै सुविधा हुन्छ भन्ने मनोरोग छरपस्ट छन् ।
जहाँ गए पनि शारिरिक, बौद्धिक श्रम गर्नैपर्छ भन्ने सामान्य सोचबिचार समेत जापान आउने सपना र हुटहुटी बोकेकाहरुले ख्याल गरेको पाईंदैन ।
अनि देखिन्छ सपना सफा, सुन्दर र चिटिक्क टोकियो शहरको । नेपालमा बसेर जापानबारे देखेको सपना र जापान आईपुगेपछि भोग्नुपर्ने बिपनामा धेरै अन्तर छ ।
नेपालमा रहँदा जापानको मात्र सपना देख्नेहरु जापान आईपुगेको २४ घण्टा नपुग्दै झल्याँस्स ब्युँझिन्छन् । यहाँको कठिन परिश्रम अनि घडीको सुई अनुसार कुद्नुपर्ने मेसिन सरहको दैनिकी देखेर ।
परेपछि टर्छ भन्ने उखान रटेकै भरमा भाषासासा उतै गएर सिकिन्छ भन्नेहरु यहाँको भिन्नै संसारमा आएपछि सिस्नुपानीले चुटेबराबर हुन्छन् । जापानी भाषामा औंठाछाप भएकाहरुको लागि जापान स्वर्ग होईन नर्क हो भन्ने ज्ञान उनिहरुले पलपलमा भोग्न थाल्छन् ।
यहाँ आएर डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्नेसम्मको दुखद अवस्थामा पुगेका केही उदाहरण पनि छन् । जापान पुगें भने के मैले काम पाउनसक्छु ? काम पाइन भनेपनि कति महिना खाली हात बस्नसक्छु ? त्यता मेरा लागि मलाई सहयोग गर्ने आफन्त, साथीभाई छन् कि छैनन् ? अनि जस्तोसुकै काम पनि गर्छु भन्ने हिम्मत नबटुली जापान आउनु भनेको जानाजान पौडी खेल्न नआउने मान्छे समुन्द्रमा छिरेजस्तै हो । जो जान त सक्छ तर सकुशल फर्कने सम्भावना आशा मात्र हुन्छ ।
किनकी यो ठाउँ भनेको कसैले कसैलाई मतलब नराख्ने, अनि आवश्यक परेको आफन्तले समेत मुन्टो अर्कातिर बटार्ने, चिनेको छैन भन्ने ठाउँ हो ।
नेपालमा पढेको प्राविधिक ज्ञान, अध्ययनको केही अंश बाहेक विद्यार्थीको रुपमा आउनेहरुले जापानमा शुन्यबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ । नेपालमा यति पढेको र उति पढेको भन्नु गफ दिन काम लाग्छ अध्ययनमा छिटफुट बाहेक ।
समग्रमा जापान आइसकेकाहरु पछुताईरहेका छन् र आउन नपाएकाहरु उतै नेपालमा पछुताइरहेका छन् ।
एउटा कुरा सत्य के हो भने नेपालमा जोसुकैले म यस्तो र उस्तो भनेर फुर्ती लगाएपनि जापानमा आएर अनिवार्य रुपमा सुरुमा गर्ने काम भनेको यामातो 'ट्रान्स्पोटेसन' बेन्तो 'खानेकुरा बनाउने' र रेस्टुरेण्टको भाडा धुने जस्ता काम नै हो । ढुक्क हुनुस् कसैले अफिसको काम, ड्युटी भन्दै अनेक शब्द सुनाएपनि गर्ने काम यिनै हुन् ।
नेपालमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हो भने पनि उसको हैसियत यहाँ औठा छाप बराबर नै हो यदि जापानी भाषामा कमजोर छ भने ।
अझ कसैले नेपालमा म म्यानेजर छु भनेर दाबि गर्छन भने त त्यो सबैभन्दा दुखी प्राणी हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।
जापानमा त्यस्ता केहि व्यवसायिक रूपले सफल नेपालीहरू पनि छन तर उनिहरुलाई म यस्तो र उस्तो भन्दै गफ दिएर हिँड्ने फुर्सद नै हुँदैन ।
नेपालमा रहनेहरु जापानलार्इ अवसरै अवसरको देश भन्छन् । त्यस्तो अवसर कसले कति पायो मुलुकलार्इ कति फाइदा भयो त्यो थाहा भएन ।
तर यत्ति हो जापानले सबैलाई कडा परिश्रम गर्न भने सिकाउँछ । कडा परिश्रम गरेपछि जहाँ गएपनि बसेपनि परिणाम राम्रो नहुनेत कुरै भएन ।
समयको सदुपयोग गरेर काम गर्ने हो भने जापानमा सबैलाई काम छ, यहाँ बेरोजगार भनेको अल्छी मात्र हो ।
जापानमा बस्ने आफ्ना आफन्त अनि साथिभाईले समुद्री किनार, टोक्यो टावर, स्कार्इ ट्री, डिज्नील्याण्ड जस्ता अन्य चर्चित र लोकप्रिय ठाउँमा बसेर खिचेको तस्बिर देखेर नेपाली समाजले जापानको मूल्यांकन नगर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीहरुले न्युनतम प्रतिघण्टा ८०० येन देखि १५०० येन सम्म ज्याला पाउँछन् । अहिलेको मुल्य भन्दा नेपाली ८ सय देखी १५ सय रुपैयाँ नै हो ।
कुनै कारणले वा बिरामी परेर काममा गएन भने वा हप्ताको एक दिन बिदा बस्यो भने त्यो दिनको ज्याला आउँदैन ।
हप्तामा सातै दिन काम गर्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ, कामको समयमा एक छिन बस्न पाइँदैन । उभिएर नै काम गर्नु पर्छ । काम सकिएर आफ्नो कोठा सम्म पुग्दासम्म खुट्टा झर्ला जस्तो हुन्छ । कहिलेकाहिँ त थकानले मेरूदण्द नै खुस्केको अनुभव हुन्छ ।
नेपालमा रहेका बाबुआमा वा आफन्त, नातागोता, साथीभाइले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जापानमा टपटप पैसा टिप्ने होईन । अधिकांशले कम्तिमा दिनको ८ देखी १० घन्टा उभिएर खलखली पसिना बगाएर, खुट्टाको कुर्कुच्चा खिईनेगरि पिँडुला बटारिएर दुखेर झर्ला जस्तो हुनेगरि दुखले बल्लतल्ल महिनाको केही बचत गर्दछन् ।
त्यसको आधा जस्तो सरकारी कर, कोठाको भाडा, कलेज शुल्क, मोबाईल खर्च, रेल भाडा तिर्दा तिर्दै सकिन्छ । बाँकी रहेको एक तिहाईले आफ्नो अन्य किनमेल गर्दा मुस्किलले केही रकम बच्न पुग्छ । बचेको मध्ये बल्ल नेपालमा पठाउने हो । किनभने यहाँ तिनुपर्ने पैसा कहिँ पनि भोली तिरौंला भनेर उधारो राख्न मिल्दैन ।
नेपालमा बसेर आइफोन ल्याइदे र ऊ ल्याइदे, यो पठाइदे भन्न सजिलो हुन्छ तर यहाँ त्यति जोहो गर्न डडाँल्नो अरर्ररिनेगरि घोटिनुपर्छ ।
मेरा प्रियजन, परिवार, साथिभाई अनि जापानको सपना हैन भूत चढेकाहरुलाई सिधा भाषामा भनौं भने सफा शहरमा लुगा त्यसै सफा हुन्छ दिनहुँ धोएर सरसफाईमा ध्यान दिएपछि ।
फेसबुकमा मुश्किलले महिनौंमा एकचोटि साथिभाईसँगको भेटमा दुख बिर्सेर रमाइलो गरेको सुकिलो र कृतिम हाँसोको फोटो देख्दैमा जापानलाई स्वर्ग सम्झनु तपाईको मुर्खता हो ।
जापान विश्वमै सबैभन्दा विश्वासिलो देश-जहाँ तपाईको हराएका सामान भेट्नेले बुझाउन हतार गर्छन् !
Gokarna Adhikari : Friday, 21 February, 2020
'मन्त्री ज्यु, मलाई तपाईको हुलिया देखेरै शंका लाग्छ'
: Thursday, 20 February, 2020
सफलता तपाईकै हातमा छ -मोहनप्रसाद खतिवडा
: Thursday, 13 February, 2020
जापानमा कोरोना भाईरसबाट ४ को मृत्यु ७६३ संक्रमित, कोरियामा ६ को मृत्यु ६०२ संक्रमित
योकोहामाबाट छुटेको महिलामा कोरोना भाईरस भेटियो, चिनमा ७७ हजार संक्रमित २४४२ को निधन
कोरोना संक्रमित पानी जहाँजबाट २३ यात्रु परिक्षणबिनै छुटेपछि जापानी मन्त्रीले माफी मागे
आज टोकियोमा भिटेनको लाईभ म्युजिकल कन्सर्ट